नेपाल भारतसँग दुइमुखे रेल किन्दै, कस्ता छन् विशेषता ? - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल भारतसँग दुइमुखे रेल किन्दै, कस्ता छन् विशेषता ?
काठमाडौं, असोज १० । निर्माण कार्य सुरु झण्डै एक दशकमा अर्थात ९ बर्षमा चिनिया रेलमार्ग काठमाडौंमा जोडिने छ। भदौ पहिलो साता नेपाली पक्षलाई चिनियाँ पक्षले बुझाएको ‘लेक पाइकु’ (केरुङ) -काठमाडौं रेलमार्ग सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले यही निष्कर्षका निकालेको छ।
चिनिया रेलमार्गले काठमाडौं जोडिने भएपछि भारतीय पक्षपनि रक्सौल-काठमाडौँलाई रेलमार्गले जोड्न कस्सिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत (०७४) अन्तिम साता भएको भारत भ्रमणमा यस सम्बन्धी सहमति भइसकेको छ। र, कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले यस सम्बन्धमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ।
भारतीय रेलमार्गले रक्सौल-काठमाडौंलाई कति अवधिमा जोड्न सक्छ, त्यो पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि थाहा होला। तर, जनकपुर-जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। र,आगामी कार्तिकसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछ।
रक्सौल आउने भारतीय रेल वा लेक पाइकु (केरुङ) बाट आउने काठमाडौँलाई जोडोस् वा नजोडोस्, निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र बर्दिबाससम्म विस्तार भएर आउने जयनगर(जनकपुर खण्डमा सञ्चालनका लागि नेपाललाई आफ्नै स्वामित्वको रेल आवस्यक छ।
स्रोतका अनुसार, नेपालले डिइएमयु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) किन्ने योजना बनाएको छ। यो भनेको डिजेलबाट चल्ने रेल हो। डिजेलले चल्ने भएपनि मूलत यो इलेक्ट्रिक रेल नै हो। किनभने, डिजेल मेसिनले रेल प्रणालीभित्रै विद्युत उत्पादन गर्छ र रेल चल्छ। त्यसो त, पूर्णरुपमा विजुलीले चल्ने रेलपनि नभएका होइनन्। तर, पूर्णरुपमा विजुलीबाट चल्ने रेललाई इएमयु (इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) भन्ने गरिन्छ।
याे पनि पढ्नुस असारभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याइने
याे पनि पढ्नुस रेल सञ्चालन गर्न रेलवे कम्पनी जागरुप हुँदै
जानकार स्रोतका भनाईमा, २ अर्ब रुपैयाँमा आठ डिब्बायुक्त यात्रुबाहक रेल ४ वटा किन्न सकिन्छ। रेल किन्नका लागि सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को बजेटमा ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ। यति रकमबाट ‘डिइएमयु’ प्रविधिको एउटा रेल आउँछ।
८ वटा कोच (डिब्बा) भएको ‘डिइएमयु’ रेल १४ सय हर्स पावरको हुन्छ भने प्रत्येक कोचमा ७३ जना यात्रु बस्न सक्छ। वातानुकुलित (एयर कन्डिसन्ड) प्रत्येक डिब्बामा हुने दुई लहरमध्ये एकातिर ३ र अर्कोतिर २ गरी ५ वटा सुविधायुक्त सिट हुन्छन्। नेपाल खबरबाट साभार
ट्याग्स: दुई मुख भएको रेल, रेल